Knowledge Archives - Page3of 13 - Myannewsmedia
ချစ်သူကို လက်ထပ်နိုင်ဖို့ တပြိုင်နက်တည်း အလုပ် (၄) ခု လုပ်ပြီး ကြိုးစားနေတဲ့ အမျိုးသား
အချစ်အတွက်ဆို ဘာမဆို လုပ်မယ့် လူတစ်ချို့ရှိတယ်ဆိုတာကို ဒီ အမျိုးသားကို တွေ့မှ ယုံကြည်သွားပါတယ်။ သိပ်ချစ်တတ်တဲ့ သူလိုလူကို ပိုင်ဆိုင်ရတဲ့ အမျိုးသမီးကတော့ သိပ်ကံကောင်းပါတယ်။ ဘ၀မှာ ချစ်ရတဲ့သူကို လက်ထပ်ယူနိုင်ဖို့နဲ့ တင့်တောင်းတင့်တယ် ထားနိုင်ဖို့ အလုပ် (၄) […]
ဟော့ပေါ့ဆိုင်မှာ ဝင်ထိုင်နေကြတဲ့ နွမ်းနွမ်းပါးပါး မိသားစုကို တွေ့လို့ မေးကြည့်လိုက်တဲ့အခါ
By phyoPosted on November 10, 2019
ဒီနေ့ စိတ်ချမ်းမြေ့စရာ အကြောင်းတစ်ခုဖြစ်သလို သာဓုခေါ်စရာ အလှူလည်းဖြစ်တာမို့ပြန်လည်မျှဝေချင်ပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ နွမ်းပါးတဲ့ သူဖုန်းစားမိသားစု က ဟေ့ာ ပေါ့စားတဲ့အဖြစ်အပျက်ကလေးပါပဲ။ ဒီအကြောင်းကို ကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့လာတဲ့ လူမှုကွန်ရက် အသုံးပြုသူတစ်ယောက်က ပြန်လည်မျှဝေထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဖြစ်ပုံက ဒီလိုပါ…. ((( မနေ့ည က […]
AB သွေးပိုင်ရှင်လေးတွေရဲ့ ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ အတွင်းစိတ်ထား(၁၀)မျိုး
By phyoPosted on October 17, 2019
AB သွေးလေးတွေဟာ သွေးအမျိုးအစားတွေအားလုံးထဲမှာ အရှားပါးဆုံး သွေးအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။ အနေအေးပြီး တည်ငြိမ်တဲ့ AB သွေးလေးတွေရဲ့ အတွင်းစိတ်ကိုနားလည်နိုင်ဖို့အတွက် ဒီစာလေးကိုဖတ်ကြည့်လိုက်ပါနော်။ (၁) အေဘီသွေးလေးတွေဟာ သူငယ်ချင်းကောင်းတွေပါ။ ဘယ်လောက်ပဲ နစ်နာနေပါစေ ဘယ်တော့မှ သူငယ်ချင်းတွေအပေါ်ကို အပြစ်မပြင်သလို၊ သစ္စာလည်းမပျက်ပါဘူး။ […]
အိမ်ထောင်ရေး အဆင်မပြေသူများ ၊ ချစ်သူဝေးကွာနေရသူများအတွက် အိမ်ထောင်ရေး အချစ်ရေး အမြန်ဆုံးအဆင်ပြေစေမယ့် ယတြာ
ဒီယတြာလေးက အချစ်ရေးမှာ ချစ်သူက ပစ်သွားသောသူ ပြန်လာစေရန် ဒါမှမဟုတ် အချစ်ရေးမှာ အဆင်မပြေနေသူနှင့် အိမ်ထောင်ရေးမှာ အမျိုးသားပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ အမျိုးသမီးပဲ ဖြစ်ဖြစ်၊ သူတို့၏ အိမ်ထောင်ဖက်နှင့် ကွဲနေလျှင် ပြန်ပေါင်းစေရန်၊ အိမ်ပေါ်က ဆင်းသွားလျှင် ပြန်လာစေရန် […]
ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းကို ကယ်တင်ခဲ့ဖူးတဲ့ မာရီလှတော ရဲ့ အကြောင်း ….
By frozePosted on September 26, 2019
အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သရုပ်ဆောင်တွေကိုရွေးချယ်ပြီတဲ့နောက်မှာ ယနေ့ခေတ် လူငယ်တွေနဲ့ အနည်းငယ်စိမ်းနေတဲ့ မာရီလှတော ဆိုတဲ့ဇာတ်ရုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ပြောပြချင်ပါတယ်။ ဒီမာရီလှတော ဆိုတဲ့ အမျိုးသမီးရဲ့ နေရာမှာ ရုပ်ရှင်နဲ့ ဗီဒီယိုသရုပ်ဆောင် မိုးဟေကိုက ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အောင်ဆန်းရုပ်ရှင်ရဲ့အခြားသော လွတ်လပ်ရေး ဖခင်ကြီးတွေကို […]
ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ ရဲ့ တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၂၂.၉.၂၀၁၉ မှ ၂၈.၉.၂၀၁၉ ထိ)
By phyoPosted on September 22, 2019
ဆရာကြီး မင်းသိင်္ခ ရဲ့ (၇) ရက်သားသမီးများအတွက် တစ်ပတ်စာ ဟောစာတမ်း (၂၀၁၉ စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက် မှ စက်တင်ဘာလ ၂၈ ရက် ထိ) ဆရာကြီးမင်းသိင်္ခ
ဆရာဝန် ၊ သူနာပြု ဆရာမလေးတွေကို ဘဝလက်တွဲဖော် အဖြစ် ရွေးချယ်သင့်တဲ့ အချက် (၇) ချက်
By phyoPosted on September 15, 2019
ဆရာဝန် ၊သူနာပြု ဆရာမလေး တွေကို ချစ်သူ တော်ထားရတဲ့ ကောင်လေးတွေဟာ ကံအကောင်းဆုံး သူတွေ ဖြစ်ကြ ပါတယ်တဲ့ ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူနာပြု ဆရာမလေးတွေ ကပဲ အခုလို ဂုဏ်ပုဒ်လေးတွေ ပိုင်ဆိုင် […]
အကြွေးပြန်ရစရာတွေရှိပေမယ့် ပြန်တောင်းရမှာ အားနာသူတွေအတွက် အကြံပြုချက် ၄ ခု
ပိုက်ဆံတစ်ခုတည်းနဲ့ စားဝတ်နေရေးအရာအားလုံး ရပ်တည်နေရချိန်မှာ ကိုယ့်ပိုက်ဆံတွေသူများဆီမှာ အလဟသတ်ပေးထားရတာမျိုး သင်အဖြစ်ခံတော့မလို့လား။ သင့်ဆိုင်မှာအမြဲလာဝယ်နေကျ ဖောက်သည်က အကြွေးမပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ခင်လို့မင်လို့ ပိုက်ဆံချေးထားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ ကိုယ်အလုပ်လုပ်ပေးထားတဲ့ ပိုက်ဆံတွေကို အလုပ်ရှင်ဖက်ကမပေးသေးဘဲ ကြန့်ကြာနေတာမျိုးတွေကို သင်တောင်းရမှာ အားနာစိတ်ဖြစ်တတ်တယ်မဟုတ်လား။ ရည်ရှည်ဆက်ဆံရမယ့်လူတွေဖြစ်တာကြောင့် ပိုက်ဆံလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ မျက်နှာပျက်စရာတွေ၊ စိတ်ခုစာတွေဖြစ်သွားမှာ […]
လူသိနည်းသေးတဲ့ “O” သွေးလေးတွေရဲ့ ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ စိတ်နေစိတ်ထား (၁၀)ခု …
By frozePosted on September 14, 2019
O သွေးလေးတွေဟာ ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ စိတ်ဓာတ်မျိုးကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူတွေပါ။ မသိတဲ့သူတွေကတော့ ဘဝင်မြင့်တယ်၊ မာနကြီးတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပေမယ့် တကယ်တမ်းပေါင်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ တကယ်စိတ်ရင်းကောင်းတဲ့သူတွေပါ။ ခန့်မှန်းရခက်တဲ့ O သွေးလေးတွေရဲ့ လူတွေမသိတဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) O သွေးလေးတွေဟာ […]
ရည်းစားတစ်ထောင်၊ လင်ကောင်တစ်ယောက် ဆိုတဲ့ စကားပုံ ကြားဖူးပါတယ်။ အမျိုးသမီးများ ရည်းစားတစ်ထောင်ထားရမယ်လို့ မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အမျိုးသားတစ်ဦးရဲ့ အကြောင်းကို ကောင်းကောင်းမသိသေးခင်မှာ အချစ်ကို ယုံပြီး ဘဝကို မပုံအပ်သင့်ပါဘူး။ အချစ်ဦးဆိုတာ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ဇာတ်လမ်းထဲမှာ အလွန်လှပသလောက် […]